‘अध्यक्षद्वय बनाउन सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीद्वय हुँदैन’ : प्रधानमन्त्री ओली (भिडिओसहित) – Himshikharnews.com
‘अध्यक्षद्वय बनाउन सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीद्वय हुँदैन’ : प्रधानमन्त्री ओली (भिडिओसहित)
१६ कार्तिक २०७७, आईतवार २१:३०
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गत भदौ १३ गते (अगष्ट २९ तारिख) प्राइम टाईम्स टेलिभिजनको लागि लिएको र प्रसारण भैसकेको अन्तर्वार्ता पूनः प्रकाशन गरिएको छ । हेर्नुहोस कुराकानीको पूरा भिडिओ र पूर्णपाठ:
– आइस नै जमेको थिएन के को ब्रेक हुनु ! आइस जमेको भए बे्रक हुन्थ्यो । मानिसहरुलाई के प¥यो भने यो हाम्रो भूमि जो सुगौली सन्धिले काली अर्थात् महाकालीपूर्वको जमिन हाम्रो जमिन हो भनेर तोकेको छ छुट्याएको छ । सन् १८१६ देखि १९६२ सम्म १४६ वर्ष त्यो जमिनको हामीले भोगचलन पनि ग¥यौं । यातायात थिएन, संचार थिएन, त्यस्तो बेला, त्यस्तो जमानामा हामीले भारत–चीन युद्धका बेलासम्म निरन्तर भोगचलन ग¥यौं । भारतले चीनसँगको युद्धका बेला कालापानीमा फौज राखेछ । त्यो धेरै पछि मात्रै नेपाललाई थाहा भयो । किनभने, यातायात थिएन । संचार पनि थिएन । मिलिट्रीको संचार थियो भनेपनि उहाँहरुको मिलिट्री त्यहाँ बसेको थियो । हामीलाई थाहा भएन । त्यसकारण २०२६ सालमा उत्तरी चेकपोष्टमा, चेकपोष्ट भनेर हाम्रो उत्तरी सीमानामा भारतले मातृकाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा जुन सम्झौता गरेर १७ वटा चेकपोष्ट खडा गरिएको थियो, मिलिट्री चेकपोष्ट उत्तरी सीमानामा यसरी राखिनु एउटा लज्जाजनक कुरा थियो । हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको लागि त्यो लज्जाजनक कुरा थियो । त्यस विषयमा कुरा उठाइयो र २०२६ सालमा ती चेकपोष्ट फिर्ता गए ।
त्यसबेला कालापानीको चर्चा कसैले पनि गरेन । चर्चा नगरेको हुनाले रह्यो, नत्र ती १७ वटा २००८ सालमा राखिएको थियो भनेँ त्यसभन्दा पछि राखिएको यो २०२६ सालमा अरु फिर्ता गर्दा भर्खरै राखिएको बाँकी रहनुपर्ने हुदैनथ्यो । यो फिर्ता गर्न धेरै गाह्रो थिएन । सन् १९५२ मा राखिएको सकियो फिर्ता गर्न भने ५२ मा राखेको सकियो फिर्ता गर्न भने १९६२ मा राखिएको नसक्ने त कुरा थिएन, सकिन्थ्यो नै । तर, त्यसबेला यो कुरै उठेन । त्यसकारण १७ वटा पोष्ट फिर्ता भए, एउटा बाँकी रह्यो । यो भूभागको विवाद कुनै आवेश, उत्तेजना र कसैसँगको वैरभावको कुरै होइन । यो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतप्रतिको कुनै हाम्रो निहुँ खोजाइ हो र ? हाम्रो कुनै नचाहिने तर्क हो र ? हामीले नयाँ निकालेको विषय हो र ? हुँदै होइन । यो विषय अगाडिदेखि नै थियो । हामीले अलिकति चर्चा गर्दै आएका थियौं । तर, जब भारतले आँठौं संस्करण भनेर नक्सा निकाल्यो । त्यसमा हाम्रो जमिनसमेत सामेल गरेर निकालेपछि हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठायौं । यो हाम्रो जमिनसमेत समेटेर निकालिएको नक्सा उपयुक्त भएन, हामीलाई मान्य छैन र हामी यसको समाधान वार्ताद्धारा गर्न चाहन्छौं, अबिलम्ब वार्तामा बसौं भनेर भन्यौं । हामीले यस्तो सन्देश पठायौं । पाँच महिनासमम त्यसको जवाफ आएन । बरु आयो बाटो उद्घाटनको कुरा । फेरि हामीले पठायौं, यो उपयुक्त भएन हाम्रो भूमिमा बाटो बनाउने, उद्घाटन गर्ने, हाम्रो भूमिसमेतलाई प्रयोग गर्ने कुरा र बाटो बनाउने कार्य उपयुक्त भएन । हामी संवाद गरौं भन्यौं । े लगातार हामीलसंवादबाट समाधान गर्न खोज्यौं । अझ हामीले नक्सा छाप्न पनि हतार गरेनौं । वार्ताबाटै समाधान गरौं, वार्तामै कुरा राखौं भन्यौं । वार्ताबाटै भइहाल्छ भने नक्सा छाप्नतिर नलागौं भनेर पर्खियौं । हामीले हतार गरेनौं । तर, त्यसको पनि जवाफ नआएपछि हामीले नक्सा छाप्यौं । नक्सा छापेपछि केहीले सम्बन्ध बिगा¥यो पनि भने । अनि के गर्नुपर्दथ्यो त ? हाम्रो जमिन छोडिदिनु पर्दथ्यो ? हाम्रो जमिन हामीले आफ्नो भोगचलनमा फिर्ता नल्याउने, त्यसलाई नक्सामा कायम नगर्ने, उतै भारतले नै प्रयोग गरोस्, किनभने मित्रराष्ट्र हो प्रयोग गरोस् न भन्नुपर्ने थियो त ? त्यत्रो विशाल भूमि भएको भारतले यति सानो हिमाली भेग जहाँ पाँचवटा गाउँ छन् । त्यसमध्ये तीनवटा गाउँ उता पारिएको छ । ती तीनवटा गाउँको कुरा मात्रै हामीले भन्यौं । ती तीनवटा गाउँ फिर्ता गरिदिन भनेका छौ । माथितिर त हिमाल छ, त्यो कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन । काली किनारका तीनवटा गाउँचाहिँ फिर्ता गरिदिनका लागि भनेका छौंं । यो कहाँ अर्घेल्याइँ भयो र ? कहाँ सम्बन्ध बिगार्न खोजेको छ र ? अलिकति भारतीय मिडियाले केही अनावश्यक ढंगले उछाल्ने काम गरेको हो ।
तस्विर :प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय/राजन काफ्ले
यो अन्तरवार्ता रिपोर्टस नेपाल डटकमबाट साभार गरिएको हो ।